Tag: ပန်းသီး Martech Zone
Web Camera နှင့်မတူညီသောမိုက်ကရိုဖုန်းတို့ဖြင့် iMovie အတွက်အသံဖမ်းခြင်း
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 4, 2021 ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 4, 2021 Douglas Karr
ဤသည်မှာလူကြိုက်အများဆုံးရေးသားချက်များဖြစ်သည် Martech Zone စီးပွားရေးနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများကို အသုံးချ၍ အွန်လိုင်းအာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးကို ဦး တည်ရန်အတွက်မောင်းနှင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ iMovie သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောကြောင့်ဗွီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်ရန်လူကြိုက်အများဆုံးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းတွင်အခိုင်အမာအရှိဆုံးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ လက်ပ်တော့ကင်မရာသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ကင်မရာမှအသံဖမ်းခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်
စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 9, 2021 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 9, 2021 Douglas Karr
အကယ်၍ သင်ဟာ ebook တစ်ခုရေးသားခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလမ်းကိုလျှောက်သွားလျှင် EPUB ဖိုင်အမျိုးအစားများ၊ စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဖြန့်ဝေမှုတွေဟာစိတ်ပျက်အားလျော့စရာမဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ebook ကို Google Play Books, Kindle နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များပေါ်သို့ရောက်အောင်ကူညီပေးမည့် ebook ဖြေရှင်းချက်များစွာထွက်ပေါ်လာသည်။ Ebook များသည်ကုမ္ပဏီများအတွက်သူတို့၏အခွင့်အာဏာကိုနေရာနှင့်နေရာတွင်နေရာချထားရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်
Google ၏ Antitrust ဝတ်စုံသည် Apple IDFA အပြောင်းအလဲအတွက်ရေလှိုင်းများ၏ Harbinger ဖြစ်သည်
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 16, 2020 တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 16, 2020 အဲရစ် Grindley
အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူလာသည့်တိုင် DOJ ၏ Google အားတရား ၀ င်ဆန့်ကျင်ရေးတရားစွဲဆိုမှုသည်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွက်အရေးကြီးသည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ စျေးကွက်သမားများက Apple ၏ကြော်ငြာသူများအတွက်ပြတ်တောက်စေသော Identifier (IDFA) အပြောင်းအလဲအတွက်ပြင်ဆင်နေကြသည်။ အက်ပဲကိုလည်းအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှ ၄၄၉ မျက်နှာရှိသောအစီရင်ခံစာတွင်သက်ဆိုင်ရာလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုအာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသောကြောင့်တင်ကွတ်သည်သူ၏နောက်ခြေလှမ်းများကိုသေချာစွာချိန်တွယ်ရမည်။ အက်ပဲလ်ရဲ့ကြော်ငြာရှင်တွေအပေါ်တင်းကျပ်စွာချုပ်ကိုင်ထားမှုကအဲဒါကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 31, 2020 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 31, 2020 Douglas Karr
Apple ကသူ့ရဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်လိုက်တဲ့သတင်းဟာကျနော့်အမြင်မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့သတင်းပါ။ ငါမိုက်ခရိုဆော့ကဂူးဂဲလ်ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ်လို့အမြဲမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ Bing ဟာဘယ်တော့မှသိသိသာသာယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာစိတ်ပျက်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် embedded browser များဖြင့်စျေးကွက်ဝေစုကိုပိုမိုရယူနိုင်သည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ သူတို့ဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် Google ကစျေးကွက်ဝေစု ၉၂.၂၇% နဲ့စျေးကွက်ကိုလုံးဝလွှမ်းမိုးထားတယ်။ Bing က ၂.၈၃% ပဲ။
SkAdNetwork? Privacy Sandbox? ငါ MD5s နှင့်အတူရပ်
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 28, 2020 အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 29, 2020 David Finkelstein
အက်ပဲလ်၏ဇွန်လ ၂၀၀၀ တွင်အိုင်အက်ဖ်အက်ဖ်သည်အိုင်အက်ဖ် ၁၄ ၁၄ စက်တင်ဘာလထုတ် iOS 2020 ဖြန့်ချိမှုတွင်စားသုံးသူများအတွက် opt-in အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ကော်ဇောသည်ဘီလီယံ ၈၀ ဘီလီယံကြော်ငြာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှနုတ်ထွက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အခု ၂ လကျော်သွားပြီ၊ ငါတို့ခေါင်းကိုကုပ်နေတုန်းပဲ။ မကြာသေးမီကအလွန်လိုအပ်နေသော ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရွှေ့ဆိုင်းမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရွှေစံချိန်စံညွှန်းအသစ်ကိုရှာဖွေရန်ဤအချိန်ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်